လူထုတိုက်ပွဲနေ့မိန့်ခွန်း ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
Thursday, October 08, 2009 0000 No comments
(ဖဆပလ) အဖွဲ့ချုပ်ကြီးနှင့် အင်အားပြိုင်ရာ၌ မရှုမလှ အရေးနိမ့်နေသော မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံ ဆာဒေါ်မန်စမစ် သည် ၀မ်းကိုက်ရောဂါ စွဲကပ်ပြီးလျှင် ၁၉၄၆ ခု၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလန်သို့ပြန်သွားလေ၏။ ဘုရင်ခံ အသစ် ဖြစ်သော ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ်သည် (ဖဆပလ) အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရင်ဆိုင်တိုးရလေသည်။ (ဖဆပလ) သည် ပြည်သူတို့၏ တပ်ဦး တကဲ့ ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး ဖြစ်မှန်းကို ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ်သည် တနေ့ထက်တနေ့ သိမြင်လာခဲ့သည်။ (ဖဆပလ) မပါဘဲနှင့် အလုပ်လုပ်၍ မရကြောင်း သိလာသဖြင့် ၁၉၄၆ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော ယာယီ အမှုဆောင် အစိုးရ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် (ဖဆပလ) ခေါင်းဆောင်များသည် မိမိတို့ မူလ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သော လုံးဝ လွတ်လပ် ရေးကို မျက်ခြည် အပြတ်မခံကြချေ။ လွတ်လပ်ရေးသို့ သွားရာ လမ်းခရီးတွင် အတားအဆီး တခု ဖြစ်နေသော ဗြိ တိသျှအစိုးရ၏ မြန်မာပြည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စက္ကူဖြူ စီမံက်ိန်းကို ကန့်ကွက်မြဲ ကန့်ကွက်လျက် ရှိနေပေသည်။
အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် မူလက စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း “စက္ကူဖြူ စီမံကိန်း ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ” ကြီးကိုတပြည်လုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် မြန်မာပြည် တပြည်လုံးခြိမ့်ခြိမ့်အုန်း အုန်း ကျင်းပခဲ့၏။ ရန်ကုန်မြို့ တွင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ခေါင်းဆောင်လျက် စက္ကူဖြူစီမံကိန်း ကန့်ကွက် ပွဲကြီးကို ကျင်းပခဲ့ရာ ယင်းဆန္ဒပြကန့်ကွက်ပွဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားသောမိန့်ခွန်းမှာ အောက်ပါအ တိုင်း ဖြစ်သည်။
ကျုပ်တို့တော့ ၀န်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြပြန်ပြီ။ ဖြစ်သာဖြစ်ရတယ် ကျုပ်တော့ ရင်တထိတ်ထိတ်ဘဲ။ ဂျပန်ခေတ်က ရှင် ကြီးဝမ်းဝင်ခဲ့တယ် မဟန်လှဘူး။ အခု ဘာဝမ်းလဲတော့ မသိဘူး။ ၀င်ရပြန်ပြီ တခါ။ ဟန်ကျမလားလို့ ခင်ဗျားတို့ က မေးချင်ပေလိမ့်မယ်။ ကျုပ်အဖြေကတော့ မပြောတတ်သေးဘူးလို့ ဖြေရမှာဘဲ။ ဒီလို မသေမချာ မြေစမ်းခ ရမ်းပျိုးရတာကြောင့်ဝန်ကြီးလုပ်ရတာ ရင်တတုန်တုန်နဲ့ လုပ်ရတာဘဲ။ တကဲ့ အမျိုးသား အစိုးရ၊ တကဲ့အာဏာ ပိုင်အစိုးရလို့ တထစ်ချ သိရယင်တော့၊ ဒီလောက် ရင်လေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ... ကျုပ်တို့ ရာထူးယူလိုက် လို့၊ ခင်ဗျားတို့ ကိစ္စတွေ အားလုံး အေးချမ်းသွားမယ် မဆိုနိုင်သေးဘူး။ မြန်မာ့အလင်း ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ တနေ့က ရေးသလို၊ လူထုတွေ ဆက်ပြီး တောင့်ထားကြအုံးလို့ ပြောရမှာဘဲ။
အခုလောက် ရာထူးနှင့် အာဏာတွေ ရလာတာတောင်၊ ခင်ဗျားတို့ အင်အား အရှိန်အ၀ါတန်ခိုးကြောင့် ဖြစ်လာရတာဘဲ။ ရှေ့ ကိုဒီထက် ခင်ဗျားတို့အားသွန် ကြိုးပမ်းနိုင်မယ်ဆိုယင် တဆင့်တက်ပြီး အစိုးရ အခွင့် အာဏာတွေတိုးပြီး ခင်ဗျားတို့ အကျိုးတွေ ပိုလုပ်ပေးနိုင်မှာဘဲ။ အခုတော့ စလုံးရေ (စ) ခါစ ဘဲရှိသေးတယ်။ ကျုပ်တို့ ရာထူး လက်ခံတဲ့အကြောင်းကတော့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ကြေညာစာတန်းထဲမှာ ပါတဲ့ အတိုင်းဘဲ ထပ် ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ ကျုပ်တို့ ပဌမဆုံး အလုပ်ကတော့ လက်ငင်း သပိတ် ပြဿနာတွေနဲ့ ပြည်သူ့လွတ်လပ် ရေး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ဘဲ။ ဖြေရှင်းလို့ရမလား မရဘူးလားဆိုတာကို အခုမပြောလိုသေးဘူး။ ဖြေရှင်းရ အောင် ကျုပ်တို့လုပ်မယ်။ လုပ်လို့မရယင် လုပ်လို့မရတဲ့အတိုင်း ကျုပ်တို့စခန်းသွားမှာဘဲ။ လုပ်လို့ရယင်လဲ လုပ် ငန်းတဆင့်တက်ပြီး သွားရုံဘဲရှိအုံးမယ်။ ပြီးတော့ ကျုပ်တို့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က စုပေါင်းတောင်းထားတဲ့အချက်အ လက်တွေရှိတယ်။ အဲဒီ အချက်တွေကတော့ အစုံဘဲ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ပညာရေး၊ အစားအစာ ပြဿ နာ၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအစရှိတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုင်တယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ တပါတည်းဘဏ္ဍာရေးအာဏာ စုံစုံစေ့စေ့ ရ ဖို့ ကိစ္စလဲ ပါလိမ့်မယ်။ သည့်အပြင် တိုင်းပြည် ပြန်လည် ပြုပြင် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေလဲ လုပ်နိုင်သ လောက် လုပ်ရမယ်။
ရည်မှန်းထားတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြုလွှတ်တော်
စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး၊ တိုင်းပြည် အကျိုးနဲ့ကိုက်နိုင်သမျှ ကိုက်အောင် ဆောင်ရွက်ရ လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကျုပ်တို့ ရည်မှန်းထားတဲ့တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ကို ဆိုက်ရောက်အောင် ပို့နိုင်မဲ့ နိုင်ငံ ရေးအခြေအနေတွေရအောင် စီမံပြီး ခြောက်လလောက်အတွင်း တရားမျှတလွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ဖို့ကိုလဲ လုပ်ရမယ်။ ဒါတွေဟာ ကျုပ်တို့လုပ်ရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အကြမ်းဘဲ၊ အတိုချုပ်ဘဲ။ ခင်ဗျားတို့ အခု ထပ်မံ ဆုံး ဖြတ် အတည်ပြုရမဲ့ အချက်တွေဟာလဲ ဒီအချက်တွေထဲမှာ အကျုံးဝင်သွားမှာဘဲ၊ ဘယ်လောက်ထိ ကျုပ်တို့ ဒီ အလုပ်တွေ အောင်မြင်မလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့တိုင်းသူပြည်သားလူထုတွေက အားပေး၊ အားပေးသလောက်အ ပေါ်မှာ တည်တာဘဲ။ ကျုပ်တို့ကတော့လုပ်မှာဘဲ။ လုပ်မဖြစ်လို့ ထွက်ရမယ်ဆိုယင် ထွက်ဖို့ဝန်မလေးပါဘူး။
ကျုပ်တို့ဝန်ကြီးတွေ ဘာတွေဖြစ်လို့ ကျုပ်တို့ဘာမှ ၀မ်းလဲမသာဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အခု ချီးကျူးထောမနာ လုပ် တာတွေလဲ မလိုချင်ဘူး။ ပီးတော့ထမင်းစားပွဲတွေ ... ဘာပွဲတွေကိုလဲ မလိုချင်သေးဘူး။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကျွေးနိုင် မွေးနိုင်တဲ့ လူစုတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်။ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကြားအောင် ဒီနေရာကဘဲ အခု ပြောရ တာဘဲ။ ဒါတွေကို ကျုပ်တို့မကြိုက်လို့လား ဆိုယင် မကြိုက်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ လူဆိုတာ အမြှောက်ခံရယင် ကြိုက်တိုက်တိုက်ဘဲ။ ကျုပ်တို့အဖို့ဆိုယင် လူထုကမြှောက်ယင်ကြိုက်တာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တို့အခုမစရသေး၊ မလုပ်ရသေးဘူး။ ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းစရာရှိလဲ အခုချီးမွမ်းမခံချင်သေးဘူး။ သို့သော် ကျုပ်တို့ လူတိုင်းလူတိုင်းဆီက အကူအညီ အထောက်အပံ့ အားပေးမှုကို လိုတယ်။ ဘယ်လိုအကူအညီအထောက်အပံ့လဲဆိုယင် ကျုပ်တို့ရာထူး မြဲအောင် ကျုပ်တို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာ တိုးတက်အောင် အကူအညီ အထောက်အပံ့အားပေးမှုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်သမားတွေ၊ လယ်သမားတွေ၊ အစိုးရအမှုထမ်းတွေ၊ ပညာရေးသမားတွေ၊ ကုန်သယ်တွေ၊ ပွဲ စားတွေ အစရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ အကျိုးတွေ လုပ်ပေးဖို့ လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ အကူအညီအထောက်အပံ့အားပေးမှု လိုတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အကျိုးတွေ လုပ်ရင်း ကျုပ်တို့ အကျိုးရှိတာမျိုးမှဘဲ ကျုပ်တို့တော့ လိုချင်တယ်။ ကျုပ်တို့ဟာ ဥပဒေအ ရတော့ ဘာဖြစ်နေနေ ကျုပ်တို့ကိုယ်ကို ကျုပ်တို့ ပြည်သူ့ဝန်ကြီးတွေလို့ယူဆတယ်။ အဲဒီအတိုင်းလုပ်မှာဘဲ။
ပြည်သူတွေဆိုတာ ဗမာပြည်မှာ တိုင်းသူပြည်သားအများနဲ့ အကျိုးတူလုပ်မယ်၊ ကိုင်မယ်၊ နေမယ်၊ ထိုင်မယ်ဆို တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ အိန္ဒိယ၊ တရုပ်၊ အင်္ဂလိပ် ကပြားများနဲ့ ဥရောပတိုက်သားများတောင် ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီ ကိစ္စရှိယင် ကိစ္စရှိသလို တိုင်ကြားအစီရင်ခံ တောင်းဆိုနိုင်တယ်။ သို့ပေမဲ့ တခုတော့ ပြောချင်တယ်။ ကိုယ့်ရေး ကိုယ်ကိစ္စကလေးအတွက် ရာထူးကလေးတွေရဖို့၊ ဟိုဒင်းဒီဒင်းတွေ ရဖို့၊ အလှူခံဖို့ အစရှိတဲ့ ကိစ္စမျိုးအတွက် တော့မလာကြပါနဲ့။ ဒီလို လူမျိုးတွေဟာ သဘောကောင်းမှန်းသိတိုင်း အခွင့်အရေးတွေယူနေယင် ကျုပ်တို့လဲ မတတ်နိုင်ဘူး။ ကျုပ်တို့လခတွေတော့လျှော့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကို ဘယ်လောက်ပေးရမယ် အစရှိ တဲ့အချက်တွေကို စဉ်းစားရအုံးမယ်။ ကျုပ်တို့လှူစရာရှိမယ်လဲမဟုတ်ဘူး။ ရာထူးကိစ္စ ဟိုဟာကလေးရဖို့၊ ဒီဟာ ကလေးရဖို့ ဆိုတာတွေတော့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ၀ါဒ စည်းမျဉ်းအတိုင်းသာ ဖြစ်မှာဘဲ။ ကျုပ်တို့ဆီလာလို့ဖြစ်မှာ မ ဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့နှင့် ခင်ဗျားတို့နှင့် အတူတူဘဲ။ ကိုယ့်စည်းကိုယ့်ကမ်းနှင့် တဦးနှင့်တဦး ကြီးကျယ်နေစရာ လူ တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောစရာရှိ လာပြောပါ။ တိုင်စရာရှိ လာတိုင်ပါ။ တောင်းစရာရှိတာတောင်းပါ၊ အချင်းချင်းသ ဘောမျိုး ဆက်ဆံကြပါ။ ပြီးတော့ ဟိုသတင်းဒီသတင်း မဟုတ်တာတွေ ကြားလဲ မယုံပါနဲ့ ကျုပ်တို့စိတ်မပြောင်း ပါဘူး။
အချို့  အရင်းရှင်ကြီးတွေဟာ ငွေနှင့်ပေါက်ပြီး ကျုပ်တို့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကြီးမှူးတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ညီညွတ်ရေး တပ်ဦး ကြီးကို ဖျက်ဆီးဖို့လုပ်နေတယ်။ အားလုံး သတိကြီးကြီး ထားကြဖို့ လိုတယ်။ အခု သပိတ်ကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး နက်ဖြန် ၁၁ နာရီ အတွင်းဝန်ရုံးမှာ သပိတ်သမား ကိုယ်စားလှယ်တွေနှင့် ကျုပ်ရယ်၊ သခင်မြရယ်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန် ကြီး ဦးတင်ထွဋ်ရယ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး သခင်ဗစိန်ရယ်တွေ့ကြပြီး၊ သ ပိတ်ကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ ကျုပ် ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး တခု ပြောနိုင်တယ်။ ကျုပ်တို့ဖက်ကတော့ ဒီကိစ္စတွေကို ရှည်လျားအောင် မလုပ်ဘူး။ အဲဒီဟာ မကြိုက်လို့ ရှည်ရှည်လျားလျားစခန်းသွားချင်ကြတဲ့ လူတွေ ရှိယင်လဲသူတို့သဘောဘဲ။ ကျုပ်တို့ကတော့ မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်ချင်တယ်။ လုပ်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျေနပ်နိုင်မဲ့တရားတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ မရလို့ရှိယင်မရတဲ့အတိုင်း ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ကျုပ် ဆုံးဖြတ်ပြီးဘဲ၊ အဲတာ ခင်ဗျားတို့ သိစေဖို့ဘဲ။
အခု ဗြိတိသျှ အစိုးရဖက်ကို လှည့်ပြီးစကားပြောချင်တယ်။ ကျုပ်သဘောကတော့ ဗြိတိသျှနဲ့ အကြောင်းကြောင်း ထောက်လို့ မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်။ မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လို့ ဒီလမ်းလိုက်ခဲ့တာဘဲ။ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့၊ သူ့ မေဓာရှိမှ ကိုယ့်မေဓာရှိနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ၊ ကျုပ်တို့ဖက်ကချည်း မဟုတ်၊ တဖက်ကလဲ ကျုပ်တို့ တိုင်း ပြည်ကြီး အကျိုးကိုဖြည့်စွမ်းပေးမှ ဖြစ်မယ်။ တဖက်စီးနင်း ဖြစ်ဖြစ်၊ တဖက်စောင်းနင်း ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကြမယ်ဆို ယင် တဦးနှင့်တဦး မိတ်ဆွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျုပ်ရှင်းရှင်းဘဲပြောမယ်။ အခု ဘုရင်ခံကိုတော့ အခုထိတော့ လူတ ယောက်အနေနဲ့ကျုပ်သဘောကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘိလပ်အစိုးရကို အထူးသဖြင့် ဗမာပြည်ရှိ ဥရောပတိုက်သား တွေကို သဘောကျပြီိလို့မပြောနိုင်ဘူး။ ဘုရင်ခံကိုတွေ့တဲ့အခါလဲ ကျုပ်ဗြိတိသျှနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာကို ပြောခဲ့တယ်။ တချို့ ကတော့ ဗြိတိသျှတွေဟာ အခုအခါ အားအင်မတန်နဲပြီးလျှင် ရှေ့ ကျဆင်းဖို့ဘဲရှိ မယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ပေါင်းလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ မေးမယ်။ ကျုပ်ကတော့ဒီလိုမစဉ်းစားဘူး။ အားနဲနေတဲ့အခါမို့ ဗြိတိသျှနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီလို ကျုပ်ပြောတာဟာလက်တွေ့ နိုင်ငံရေးသဘောမဟုတ်ဘူးဆိုချင်တဲ့ လူ တွေ ရှိချင်လဲရှိမယ်။ ဘာပြောပြောကျုပ်စဉ်းစားရသလောက် ကျုပ်သဘောထားဟာ ဒီအတိုင်းဘဲ။ ဒီအတိုင်း လုပ်မှာဘဲ။ လုပ်လို့မရယင် ကျုပ်တို့အပြစ်မဟုတ်ဘဲ၊ ဗြိတိသျှတို့ရဲ့အပြစ်သာဖြစ်မယ်ဆိုတာ တိတိလင်းလင်း ကျုပ်ပြောလိုတယ်။
နောက်ဆုံး .... ကျုပ် အကြောင်းကို ခင်ဗျားတို့ကို နဲနဲပြောချင်တယ်။ အခုအခါကျုပ်ဟာ (ပတ်ဗလစ်မှာ ပေါ်ပြူ လာ ဖြစ်နေတဲ့လူဘဲ)။ ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဟာ ဘုရားလဲမဟုတ်၊ မှော်ဆရာ မျက်လှည့်ဆရာလဲမဟုတ်။ လူဘဲ။ နတ်လဲ မဟုတ်၊ လူလောက်ဘဲ အစွမ်းရှိမှာဘဲ။ ကျုပ်အသက်ဟာ အင်မတန်ငယ်တယ်။ ကျုပ်အခုထမ်းရတဲ့တာဝန်ဟာ လဲ၊ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့တာဝန်ကို ရှေ့ ဆုံးကထမ်းနေရတယ်။ ကျုပ်ကိုယ်ကို ဒီတာဝန်တွေထမ်းနို်င်အောင် အရည် အချင်းပြည့်တယ်လို့ မယူဆဘူး။ ပြီးတော့ ကျုပ် စိတ်တိုတတ်တယ် ဆိုတာကိုလဲ လူအများသိကြတာဘဲ။ ဒါ ကျုပ် နဂိုဘဲ။ အလုပ်ရှုပ်ပြီးအနှောင့်အရှက်များယင် စိတ်တိုတတ်တယ်။ ဒါကို ပြုပြင်နိုင်သမျှ ပြုပြင်ဖို့ ကြိုးစား မယ်။ သို့သော်လဲ ခင်ဗျားတို့ စိတ်ရှေရှေထားကြပါ။ ကျုပ်လဲစိတ်ရှေရှေထားပြီး၊ ကနေ့ပြတဲ့ အင်အားမျိုးထက် ဆ ထက်ထမ်းပိုး တိုးအောင်လုပ်ပြီး၊ ကျုပ်တို့က ခင်ဗျားတို့အတွက် လုပ်တဲ့နေရာမှာ အားပေးမယ်ဆိုယင်၊ ကျုပ်တို့ လိုချင်တဲ့လွတ်လပ်ရေး၊ လူထုကောင်းစားရေးတွေကို ရအောင်ပိုလုပ်နိုင်မယ်။ ပိုအကျိုးရှိမှာဘဲ။ ဒါကြောင့် လူထု တွေကို ဆက်တောင့်ထားကြပါအုံးလို့ဆိုတာ ထပ်ပြောခဲ့ချင်တယ်။ ။
၁ - ၉ - ၄၆
Posted in: ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းများ
63110.1/5 Soi Sapphakan, Interakiri Road, Maesot, Tak Province,Thailand 66 55 542649 http://humanresourceprogram.blogspot.com hrdpme...
Political Science Part (12)
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာ အပိုင်း (၁၂) ဆွစ်ဇာလန်ပြည်ထောင်စုJustify Full ဆွစ်ဇာလန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကင်တွန်းခေါ် ပြည်နယ် ၁၉ - ပြည်နယ်တို့၏ တ၀က်စီဖြင့် ...
Basic Political Science Part (19)
အခန်း(၁၉) နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့် သဘောသဘာဝများ အပိုင်း (၁၆) နှိုင်းယှဉ်ချက် ပုဂံကို သမုဒ္ဒရာဇ်မင်းမှ ၁၀၇ - ၁၅၂ အတွင်း တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု လေ...
The New Order of Anti Poverty of Burma
The New Order of Anti Poverty of Burma အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်သစ်
၁၁၉။ကိုဆိုဗို(Kosovo) Republic of Kosovo နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း (၇) ရာစု အတွင်းက ဆာ့ဘ်တိုင်းရင်းသားများ ယခု ကိုဆိုဗို ဒေသသို့ ၀င်ရောက်လာခ...